Nisy ny fifanakalozana sy ny fijoroana vavolombelona ary ny fampahafantarana ireo hopitaly rehetra eto Madagasikara miasa ho amin’ny ady amin’ny fivadihan-tongotra. Nivoitra tamin’izany fa noho ny fahantran’ny Malagasy dia matetika tsy voatsabo ary tsy voakarakara mihitsy ireo ankizy mivadi-tongotra. Voailika sy avahana mihitsy izy ireo ary hita ho tsy miaina tsara tahaka ny ankizy rehetra na any am-pianarana na eny amin’ny fiarahamonina misy azy. Izany rehetra izany no anton’ny fiaraha-miasan’ny Miracle feet sy ny Fondation Telma mba hanatsarana ny fitsaboana io tsy fahatomombanana ara-batana misy io. Anisan’izany ohatra ny fametrahana ilay fitsaboana atao hoe Ponsenti izay iandraketan’izy ireo tanteraka ary efa hita eny amin’ny hopitalim-bahoaka rehetra eny. Tanjona ny hananan’ireo ankizy marary ireo ny fahasitranana ary ny fiainana tahaka ny rehetra ka hahatsiaro tena tsy ho vesatra sy ho voailika eo amin’ny fiarahamonina intsony.